Chikeko: छाडा जोक्सChikeko jokes and stories about lado and puti - Welcome to full sex entertainment site
समझदारीमा हो भने चिक्नु पाप हुँदैन ।
कुवाँरी सँग भए त झन मजाको कुनै सिमा हुँदैन ।
तर कन्डम भने लगाउन विर्सनु हुँदैन ।
किनकी त्यसबेला आँफ्नै लाँडो कन्ट्रोलमा हुँदैन ।
युवती युवकको लाँडो चुस्ने क्रममा :
युवती : १००० दे नत्र टोक्दिन्छु
युवक : (१००० को नोट दिंदै) ५०० फिर्ता दे नत्र मुत्दिन्छु ।
श्रीमान श्रीमती रातिमा चिकिराखेको बेलामा छोरा विउँझिन्छ । छाराले आफ्नो बाबु आमाको चर्तिकला देखेर सरासर बाथरुममा गएर हस्तमैथुन गर्न थाल्छ ।
यो देखेर बाउले छोरोलाई सोध्छ :
बाबु : ओई गधा केगर्दैछस् हँ ?
छोरो : के गर्नु नि म आफ्नो काम आफैं गर्दैछु म तपाईजस्तो थोडी अरुको आमालाई चिक्छु त ।
त्यसैले त र्सूय आगो छ
धनियाँ : चाट दोकान त खोलियो तर ग्राहक कसरी तान्ने
रामविलास : म माईकिङ्ग गरेर यसरी ग्राहक बोलाउँछ नि "अरे हुजुर आइलिनुस, आइलिनुस, धनियाँलाई १० रुपियाँ दिनुस् अनि चाट लिनुस् "
ठेकेदार : यसको लागि त नौ महिना लाग्छ बाबु ।
छोरा : नाई यति ढिलो हँुदैन बरु अरु थप चार कामदार काममा लगाउनुस् ।
छोरा : हिजो राती दाईले कोल्डक्रिम माग्याथ्यो मैले गल्तीले फेब्रिकोल दिएछु ।
हतारका कारण कम्पनी मालिक आफ्नो प्यान्टको फस्नर लगाउन विर्सेर यत्तिकैमा अफिस पुगेछन् ।
सेक्रेटरी : (नजिकै पुगेर सुटुक्क) सर आज अफिस आउने बेलामा ग्यारेजको ढोका लगाए नलगाएको राम्ररी चेक गर्नुभो त
आफ्नो सेक्रेटरीको कुरा बुझन नसकी मालिक अचम्मीत हँुदै आफ्नो अफिस भित्र छिरेछन् । केही समय काम गर्दै गर्ने क्रममा उसले आफ्फस्नर खुला रहेको देखेछन् र हतारमा फस्नर लगाएछन् । अनि बल्ल सेक्रेटरीले भनेको कुरा बुझेर चिया माग्ने निहुँले सेक्रेटरीकोमा गएछन् र सोधेछन्
मालिक : जब तिमिले ग्यारेज खुला देख्यौ के तिमिले त्यहाँ पार्क गरी राखेको मेरो ठूलो बस पनि देख्यौ
सेक्रेटरी : (युवती अलि लजाउँदै) नाई सर मैले त दूइटा ठूला टायर भएको एउटा सानो मिनी मात्रै देखें ।
विहे भएको धेरै समय पश्चात दुइ युवती साथीहरु भेट भएछन् र कुराकानीको क्रममा
पहिलो युवती : आजकल तिम्रो दीनरात कसरी बित्दैछ त ?
दोस्रो युवती : उही त हो नि । दिनभर चुला अगाडी रात परेसी गुला अगाडी ।
बिरामी : डाक्टर साब मेरो लिङ्ग उठ्दै उठ्दैन ।
डाक्टर : प्रेमीका छ ?
बिरामी : छैन ।
डाक्टर : रण्डीबाजी गर्र्छौ ?
बिरामी : नाई गर्दिन ।
डाक्टर : हस्तमैथुन गर्र्छौ ?
डाक्टर : उसोभए लिङ्ग उठाएर के फाईदा ।
एक युवती पुलीस चौकीमा आफ्नो बलत्कार भएको उजुरी गर्ने क्रममा
युवती : इन्स्पेक्टर साब, चारजना मध्ये एक जनाले मेरो स्तन माड्यो, अर्कोले किस गर्‍यो अर्कोले र्स्कर्ट माथी सारी कट्टु च्यातेर पुतीमा जर्बजस्ती चिक्यो
इन्सपेक्टर : अरे चुप लाग उजुरी गरेको कि मेरो लाँडो ठन्काको ?
एक ब्यक्ति चिक्ने बेलामा लाँडो नठन्के पछी बाथ टबमा गएर तातो पानीमा लाँडो डुबाएछ यो देखेर उसकी श्रीमती अचम्म मान्दै सोधिछ ।
श्रीमती : के गर्नुभको ?
श्रीमान : पञ्चर छ की भनेर चेक गरेको ।
२०५३ सालको कुरा हो। म पहिलो चोटी काठमाण्डौ आएको थिए। त्यस ताका अहिलेको जस्तो माईक्रो बस थिएन, मिनी बसमा घुइचो हुन्थ्यो । एकदिन म अफिस जानें बेलामा घरबेटी साहुनीको छोरी पनि म सँगै जानें भनेर निस्की। मेरो अफिस उसको स्कुल जानें बाटो भएर जानु पर्थ्यो । हामी एउटै बसमा चढ्यौ । बसको ढोकाबाट छिरेको मात्र थियौ कि सररर हावा चल्यो र हावाले साहुनीको छोरीको फ्रँक पुरै माथि उठाई दियो। आम्मै उसलें त पेन्टीनैं नलगाएको रहिछे। बसमा भएको सबै ढंग परें, म पनि चुप । ड्राइभर दाईलें कर्‍याक्क गर्दै २ सयको नोट निकालेर भन्यो,’ बहिनी ल पेन्टी किनेर लगाउ ।’ केटी रमाउदै ,’ थ्यांङ्क्यु’ भनि। भोली पल्ट सायद उसले आमालाई भनेछ क्यार, २ सय कमाउने बिचारलें आमा पनि विना पेन्टी निस्की, हावा पनि चल्यो, फ्रँक पनि उडायो ड्राइभर दाईले कर्‍याक्क गर्दै २ रुपैयाँको नोट झिकी भन्यो,’ दिदी लिनुहोस् ब्लेड किनेर खुरकेर फाल्नुहोस्’ ।
Categories : छाडा जोक्स चिकेको
5:35 PM Unknown9comments
nice lado puti
Are you looking some dicreet relationship in kathmandu?
lady mail me at glsanty11@yahoo.com